Myanmar Unicode Fonts: Download Myanmar Unicode Fonts
"Unicode ... has become an essential component of world literacy..." — Charles Bigelow
Myanmar NLP Product Unicode Fonts
1. Myanmar1 - Font Download | Keyboard Layout | Installation Guide
2. Myanmar2 - Font Download & Keyboard Layout | Installation Guide
3. Myanmar3 - Font Download & Keyboard Layout | Installation Guide (Latest Version)*
~ကခဂဃင စဆဇဈည တထဒဓန ဋဌဍဎဏ ပဖဗဘမ ယရလဝသ ဟဠအ~
Solveware Solution Products Unicode Fonts
1. MyaZeDi - Font Download | Keyboard Layout
2. Parabaik - Information | Font Download & Keyboard Layout
3. MayKha & MaLikha - Information | Font Download & Keyboard Layout
ThanLwinSoft Product Unicode Fonts
1. Padauk - Font Download & Keyboard Layout
UniMM Product Unicode Fonts (Cross Platform)
1. UniBurma - Font Downloads & Keyboard Layouts
Alpha Zawgyi Product Unicode Fonts (Semi-Unicode Fonts)
* Information Page | Zawgyi Official Site
1. AlphaZawgyi - Font Downloads & Keyboard Layouts All Version
Converters For Myanmar Unicode Fonts
(ဝ၁) Burglish Font Converter : မြန်မာတတ်သိများအဖွဲ့ မှ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ကြိုးပမ်းမှု တစ်ခု ဖြစ်ပြီး မြန်မာ-၃ နှင့် ဇော်ဂျီ အပါအဝင် မြန်မာ ကွန်ပြူတာ လောကအတွင်း ထင်ရှားသော ဖောင့်ထ် ၁၆-မျိုး ခန့်အား တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ အွန်လိုင်းပေါ်၌ပင် လွယ်ကူစွာ ပြောင်းလဲ ရယူနိုင်ရန် စီစဉ်ထားရှိသည်။
(ဝ၂) ThanLwin Soft Converters : ပိတောက်ဖောင့်ထ် ကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်သော သံလွင်ဆော့ဖ်မှ ထုတ်လုပ်ထားသော ဖောင့်ထ် ကွန်ဗာတာ ဆော့ဖ်ဝဲရ်များ ဖြစ်ကြသည်။ မိမိ၏ ဝင်းဒိုးစ် စနစ်အတွင်း ထည့်သွင်း အသုံးပြုရပါမည်။
(ဝ၃) KaNaung Font Converter : မြန်မာတတ်သိများ အဖွဲ့၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု တစ်ခုပင် ဖြစ်ပြီး မိမိ၏ ဝင်းဒိုးစ် စနစ်အတွင်း ထည့်သွင်း အသုံးပြု နိုင်သော ဆော့ဖ်ဝဲရ် တစ်ခုပင် ဖြစ်ကာ ဇော်ဂျီနှင့် မြန်မာ-၃ အပါအဝင် အခြား နာမည်ကြီး ဖောင့် ၁၄-မျိုးတို့အား အပြန်အလှန် ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်။
(ဝ၄) Offline MMFont Converter : ဝဘ်ဘလော့ဂ်များ နှင့် ဝဘ်ဆိုဒ်များတွင် ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်သော အော့ဖ်လိုင်း ဗားရှင်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး မိမိဆိုဒ်၏ စာဖတ်သူမှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဖောင့်ထ် ကို ရွေးချယ် အသုံးပြုစေနိုင်သည်။ အသုံးပြုနည်းကို မူရင်း ဘလော့ဂ်တွင် ရှာဖွေဖတ်ရှုနိုင်ပြီး မြန်မာ ဘလော်ဂါ တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုသင်ကာ မှ ထပ်မံ ရေးသား ထားသည်ကိုလည်း ဤနေရာတွင် သွားရောက် လေ့လာဖတ်ရှု နိုင်သည်။
Posted by Mhaw Sayar at 6:48 PM
hi I am Aung Thu Myat from cashier software company
က်ြန္ေတာ္တို႕software က non-unicode ျဖစ္ေန လို႔ myanmar font သံုးလို႕ မရ ျဖစ္ေနပါတယ္,တကယ္လို႕
၇ခဲ႕၇င္ project အပ္ခ်င္လို႕ပါခင္မ် ေက်းဇူးျပဳ ရ် ္ဆက္ သြယ္ေပး ပါ ခင္မ် 01703788
Unicode and Culture of Myanmar Language
Unicode & Culture of Myanmar Language.
Getting Start With Unicode
Myanmar Language Tech.
Unicode on Math Utah Edu
Unicode on Alanwoood
Unicode on WikiMyanmar
MM Unicode Resources
ThanLwinSoft MM Unicode
MM Language Technology
MM Geeks Forum
Burglish System (En-My)
Myanmar Script Picker
MM Characters on Unicode Table
Myanmar Unicode Gallery
Other Unicode News
“Embrace Unicode, don't fight it; it's probably the right thing to do,..." — Tim Bray • (more)